Ny Riankalo — Tsara Soratra
Ny riankalo dia endri-tsoratra iray natao hanehoana ny kanto vita amin'ny teny. Miendrika lahatsoratra tsotra izy kanefa ahitana ireo singa rehetra mety ho hita ao amin'ny tononkalo: rima, sarin-teny, fehezanteny mifamaly rafitra, kilalaon-teny. Tsy lahatsoratra tsotra izy satria ahitana fiangaliana sy ahitana taratra ny hananatratra ny antsoina hoe poezia vita amin'ny teny. Tsy tononkalo koa anefa satria tsy manara-drafitra.
[[ azonao jerena eto ireo riankalo voarakitra eto amin' ny TSARA SORATRA ]]
Ny riankalo araka izany anarany izany dia kalo mikoriana sy mibosesika ao an-dohan'ny mpanoratra ka tsy hay tohaina fa tsy maintsy soratana. Toy ny resaka ifanaovan'ny olon-droa izy, mety ho taratasy alefa mankany amin'ny olon-tiana, mety ho fanehoan-kevitra momba ny toe-javatra iray, mety ho fanehoana fahatsapana anaty. Tsy sombin-tantara izy, tsy sombin-tsoratra koa satria tena soratra feno sy mahaleo tena ny riankalo tsirairay. Amin'ny mahazava-kanto azy dia ahitana fanehoan-kevitra manaitra, fomba filazan-javatra miala amin'ny mahazatra, fa tsy hoe rehefa lahatsoratra dia hoe riankalo.
Ny mpikambana Faribolana SANDRATRA aloha hatreto no tena mahafehy azy sy mitrandraka io endri-tsoratra io. Ny mahafaly dia efa be ny manao fikarohana momba azy eny amin'ny oniversite. Am-panetren-tena no ilazanay eto fa ny tenanay no namorona ny voambolana hoe : RIANKALO ary ny Boky navoakanay hoe:"ZEDAZEDA" no boky voalohany mirakitra RIANKALO.
Ny riankalo nosoratanay mitondra ny lohateny hoe : "Ho an'i Volana" no nahazo ny loka voalohany natolotry ny Akademiam-pirenena Malagasy tamin'ny hetsika hoe:" Hanehoy fitiavana ny teny Malagasy ny taona 1999, marihina fa ny taona 1991 no nanomboka namoahanay ny riankalo ary tao amin'ny radio Feon'ny vahoaka no namakianay azy tamin'izany fandaharana iray mandeha isan-kerinandro.
Ranoe: RAkotomahafaly NOrbert Eugene manoratra tononkalo, sombin-tantara, tantara fandefa amin'ny radio, famotopotoran-kevitra, nitarika voalohany ny riankalo ary namorona io voambolana io, namorona ny gazety Ambioka hany gazety literera mandeha singa misy eto Madagasikara, mpanao velakevitra literera manerana an'i Madagasikara, mpikabary, mpanao gazety, mpampianatra taranja Malagasy.
tagged with fakafaka